Konke mayelana ne-Amsterdam - Yini ongayibona, okufanele ukwenze nezinhlelo zakho ezinhle kakhulu | Ukuhamba kwe-Absolut
I-Amsterdam idolobha elingelaseNetherlands futhi liseYurophu. Yasungulwa lapho ngekhulu le-XNUMX sengathi kwakungumuzi omncane wokudoba. Okuthile ngokuhamba kwesikhathi kube ngenye yezindawo ezibaluleke kakhulu endaweni emazingeni amaningi futhi ezokuvakasha zingenye yazo.
Enye yezinto ezikhangayo kakhulu yimisele yayo, ngoba noma ngabe sibheke kuphi, igezwa yiyo. Zingamakhilomitha angaphezu kwekhulu ngesimo semisele, namabhuloho azo futhi, nezindlu zazo ezintantayo eziheha ukunakwa okukhulu. Uma sikhuluma ngezikebhe ezindlini, asikwazi ukukhohlwa iMakethe Yezimbali, nayo entanta futhi isukela ngekhulu le-100. Kuyo, ungathola izinhlobo eziningi zama-tulip bulbs.
Indawo ephoqelekile yamasiko iseVan Gogh Museum, lapho kukhonjiswa khona iqoqo elibanzi lemisebenzi yakhe. Ukulandela umzila, akukho okufana nokuthatha isithombe sezingadi zeBejijnhof nokufinyelela enhliziyweni yedolobha enegama leDam Square, indawo enomkhathi omningi. Isifunda iRed Light singesinye esidume kakhulu, lapho ungavakashela isonto lase-Oude Kerk, kanye nesifunda saseJordaan futhi, ne-Anne Frank House, nayo engenye yezimpawu zendawo. Ukunqamula ukunqamula, akukho okufana neVondelpark okuzoqedwa e-Amsterdam Museum noma eRijksmuseum, ekunikeza wonke umlando wale ndawo.
Uma ucabanga ngalokho ongakubona e-Amsterdam ezinsukwini ezi-3, sizokukhombisa izindawo ezinhle kakhulu ...
Namuhla siya eVolendam. Idolobha elincane elisenyakatho ne-Amsterdam nokuthi ...
Isifunda se-Amsterdam Red Light: amalambu, umbala nokukhonjiswa
IDutch Amsterdam iyaqhubeka nokubonakala njengenye yezindawo ezikhululekile, zomlando nezilangazelela kakhulu eYurophu. Idolobha elikhulu ...
Por I-Absolut Amsterdam kwenza iminyaka 5 .
Izindawo ezihamba phambili nezindawo ezingqingili zezitabane nabesilisa abathandana nabesifazane e-Amsterdam
Izindawo ezizungeze iZeedijk zingenye yezindawo ezikhangayo e-Amsterdam ngenxa yezitolo zayo eziningi futhi ...
Por I-Absolut Amsterdam kwenza iminyaka 6 .
I-Amsterdam iyinhloko-dolobha yeNetherlands. Waziwa ngokubekezelela kwakhe izidakamizwa, inkululeko yomuntu ngamunye ...
Indlela yokuphila e-Amsterdam
I-Amsterdam idolobha elinikezela ngolwazi olufanelekayo kuzo zonke izivakashi. Ipaki elikhulu elibizwa ngeVondelpark livelele, ...
Ithempeli laseHua Hua liyithempeli elikhulu kunawo wonke lase-European Buddhist ngesitayela sendabuko samaShayina. Itholakala endaweni yase-Asia ...